PET inofuridza bhodhoro
Mabhodhoro asina chinhu
Mist sprayer bhodhoro
PET pombi bhodhoro
PET bhodhoro rine makepisi
Shampo & Body care bhodhoro
shampoo & bhodhoro rekugeza
mwana & mon
Cosmetic packaging chubhu
chubhu ine applicator
Airless bhodhoro & Acrylic Cream chirongo
Chirongo chepurasitiki & Runako sirinji
PET / PP / PE chirongo
Lip gloss chubhu
CAPS / KUSVIRA / MABOXES
Ndapota verenga mitemo nemamiriro aya zvakanyatsonaka.Iwo ane ruzivo rwakakosha maererano nekodzero dzemutengi (“Mutengi”) dzemutemo, waranti, zvisungo uye mhinduro dziripo dzekugadzirisa gakava.
Heypack inyanzvi yekushongedza yekurongedza mugadziri, timu yekugadzira dhizaini uye boka rehunyanzvi rekutengesa kuYiwu Zhejiang.Isu tiri bhizinesi rakazvimiririra rinotarisa mukugadzira uye kutengesa kwese marudzi epakeji uye midziyo.Kwemakore gumi nemashanu apfuura, takapa sevhisi yepasuru kune mamwe mabhizinesi akawanda.Isu takatsaurirwa kuvandudzwa kwedanho rekugadzira rebhizinesi redu.
Kana uine chero mibvunzo nezve Webhusaiti kana Mitemo Yekushandisa, ndapota bata:kutengesa07@heypack.com
Nekuwana uye nekubatanidza kune Webhusaiti kubva kune chero chishandiso chinosanganisira asi chisina kuganhurirwa kune;kubhurawuza iyo Catalog kuburikidza neWebhusaiti, kuverenga zvimwe zvikamu zveWebhusaiti kana kuonana kuburikidza neWebhusaiti, Unobvuma kubvuma uye kutevedzera iyi Mitemo Yekushandisa uye Yekuvanzika Policy ine zvakare ruzivo nezve Cookies uye mashandisiro avo.Kana Iwe usingabvumirani zvizere kana muchikamu neMitemo yeSevhisi iyi kana iyo Yakavanzika Policy, Iwe unofanirwa kusiya Webhusaiti uye worega kushandisa masevhisi ayo nekukurumidza.Heypack inogona nguva nenguva kuchinja kana kugadzirisa zvese kana chikamu cheMatemu eSevhisi kana iyo Yakavanzika Policy.Heypack saka inokupa zano kuti uverenge Mitemo yeSevhisi nguva dzose uye kudhinda kopi yeMitemo Yekushandisa iyi kuti utarise mune ramangwana.
Kuwana kune Webhusaiti ndeye mahara.Kupinda kune Webhusaiti kunobvumidzwa pahwaro hwekuti Heypack inogona, pakufunga kwayo uye pasina chiziviso, shandura / kudzima / kukanganisa / kumisa chero chikamu cheWebhusaiti kana iyo yese.Heypack haina mhosva kwauri kana chero bato rechitatu, kana chero chikamu kana iyo Webhusaiti yese isingasvikike, kuwanikwa kana kuwanikwa chero chikonzero.
Ruzivo rwunopihwa paWebhusaiti, uye mukati meCatalogue, nderweruzivo rwese chete uye haruumbe kana kuvaka chibvumirano chekutengesa kana kutenga kana kupa chero rudzi.Rumwe ruzivo runogona kukumbirwa kuburikidza ne 'CONTACT US' peji reWebhusaiti.
Iwe unofanirwa kubvumirana:
• kusaedza kukunda chero chengetedzo kana dziviriro paWebhusaiti;
• kusaburitsa, kudzokorora, kukopa kana kutengesazve chero chikamu cheWebhusaiti;
• kusapinda pasina mvumo, kuvhiringa, kukanganisa kana kukanganisa:
- chero chikamu cheWebhusaiti;
- chero midziyo kana network iyo iyo Webhusaiti inochengeterwa;
- chero software inoshandiswa mukupihwa kweWebhusaiti;kana
- chero midziyo kana network kana software ine kana inoshandiswa nechero bato rechitatu.
Pasina muganho, mafoto ese, tsananguro, mavhidhiyo uye magiraidhi uye zvese zvirimo mukati meWebhusaiti uye Catalog zvinhu zveHCP Boka.Unotenderwa kushanyira Webhusaiti, kudhinda uye kukopa mifananidzo, uye kutumira mifananidzo iripo paWebhusaiti kuti uzvishandise zviri pamutemo chete uye kwete zvekutengesa kana kutengesa zvakare.Iwe haubvumidzwe kukopa yakazara kana muchikamu iyo Webhusaiti uye Catalog pasina mvumo yekutaura yeHeypack.
Heypack haina mhosva yekukuvadza kana kukanganisa kunokonzerwa nechero kukanganisa, mavhairasi, kusiiwa, mafaera ane huori, nyaya dzekubatanidza, kutadza kwemidziyo, kana kudzima zvemukati.
Heypack inotengesa yakazara inopa yakazara kune Bhizinesi Vatengi, ukuwo ichishandira vanhu.Kazhinji iyo shoma yekurongeka ndeye 10000 zvidimbu padhizaini.
Tinobvuma kubhadhara sezvinotevera.30% T/T dhipoziti, 70% muyero usati wasununguka 30% T/T dhipoziti, muyero L/C 100% TT pachine nguva, Western Union/ Paypal nokuda shoma mari muripo.
Tinogona kupa nzira dzakasiyana-siyana dzekudhinda: kudhinda kwescreen, kupisa stamping, offset kudhinda,
kuisa mazita uye nezvimwe.
Nguva yedu yekugadzira inogara iri 20-25days mushure mekutanga-kugadzirwa sampuli yekusimbisa.Kana chikumbiro chako chekukanzura chikaonekwa tisati tagadzirisa odha yako, isu tinofara kukanzura odha yako kuti udzoserwe zvizere, asi kana kurongeka kwave kushanda, hatichakwanise kukanzura.
Maodha ese ehoresale ndeyekupedzisira uye haakwanise kudzorerwa kana kuchinjana.
Zvinhu Zvakakuvadzwa / Zvikanganiso zveOdha
Kunyangwe chigadzirwa chega chega chichiongororwa kuvimbiswa kwemhando isati yatumirwa, zvinokwanisika kugamuchira chinhu chakakanganisika.Mukuwedzera, nekuda kwekukanganisa kwevanhu, kukanganisa kwehurongwa kunogoneka.Nezvikonzero izvi, zvakakosha kuvhura & kuongorora zvinhu zvako kana wangozvigamuchira.
Ndokumbira utizivise mukati memazuva ebhizinesi e5 ekugamuchira pasuru yako kana paine chakaipa neodha yako.Hatigone kukudza shanduko kunze kweiyo nguva yakatarwa, sezvakataurwa mukati memitemo yedu.
Heypack haina mhosva yekurasikirwa chero kupi kana kukuvara kunoitika nekuda kwekunonoka kana kusakwanisa kuburitsa kunokonzerwa nezviito zvaMwari;mamiriro okunze akaoma;war;common disaster;moto;strikes;kukanganisa kwevashandi;kunonoka kuendesa zvinhu kana zvinhu nevatengesi;kuisirwa zvirango zvehurumende, mirau, miganhu yemitengo kana kudzora;tsaona;kunonoka kwevatakuri vese;kunonoka kubviswa kwetsika;kana kubva kune chero chimwe chikonzero chisingadzivisiki kana kupfuura Heypack ine musoro kutonga.Chero zuva rekutumira rinogona kuwedzerwa, pasarudzo yeHeypack, kusvika pamwero wekunonoka kupi zvako kunokonzerwa nechiitiko cheforce majeure.
Copyright 2021All Rights Reserved.